BVI တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း - IBC BVI တွင်တည်ရှိသည်
BVI တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ရှာဖွေနေပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည် -
BVI တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန် BVI တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ BVI တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI တွင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ BVI ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI တွင်ရှိသောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ဖြင့်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့သည်။
Million Makers BVI သည်ဖောက်သည်များအား BVI နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက်အခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းကိုပေးသည်
BVI မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ BVI မှကမ်းလွန်ဒေသများနှင့်လွတ်လပ်သောဇုန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် BVI တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။
လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် BVI အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းလျှောက်လွှာတင်သည်။
BVI လိုအပ်သည့်ကုမ္ပဏီတွင် BVI တွင်ဘဏ်အကောင့်ရှိပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်သင်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်လိုအပ်ရင်။
BVI တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် (သို့) ဘဏ်သုံးပစ္စည်းများပေးပို့ခြင်း (အမိန့်ပေးလျှင်) ။
BVI နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။
BVI နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့အတွက်ပြည့်စုံသောစီးပွားရေးအဖြေများနှင့်အတူ BVI အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ BVI အတွက်ဘဏ်စာရင်း၊ BVI အတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ BVI အတွက် Virtual နံပါတ်၊ BVI အတွက် CRM Solutions၊ BVI အတွက် virtual ရုံး၊ နိုင်ငံများနှင့်အများကြီးပို။
ယနေ့သင်၏ BVI စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအမည်ရယူပါ။
သင်၏ BVI စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအမည်ကိုရှာပါ
နိဒါန်း BVI ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း
လှေလှော်ခုန်ခြင်း၊ ငါးဖမ်းခြင်းနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပင်လယ်ကမ်းခြေများတွင်နေရောင်ခြည်ကိုစုပ်ယူခြင်းသည်လှပသောဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစု ၆၀ တွင်ထိုသို့ဖြစ်သည်။ ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုများ၏ထူးချွန်မှုကိုရှာဖွေခြင်းသည်ဤယူနန်ပြည်နယ်၏မီးတောင်ကျွန်းစုရှိကျွန်းတိုင်း၏ထူးခြားသောလက္ခဏာကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ BVI ၏အကြီးမားဆုံးကျွန်းလေးကျွန်း၏ဘဝလမ်းစဉ်နှင့်သမိုင်းမှသည်မရေမတွက်နိုင်သောပုံမှန်ကျွန်း ၅၀ ထက် ကျော်လွန်၍ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအံ့သြဖွယ်ရာအထိကျောက်ချစခန်းတစ်ခုစီသည်ကိုယ်ပိုင်ထူးဆန်းသောနတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်ကိုကမ်းလှမ်းသည်။
BVI တွင်ကျွန်းပေါင်း (၆၀) နှင့်ကေး (cay) ၂၇ ခုပါ ၀ င်ပြီး၎င်းမှာကျွန်းစု ၂၇ ခုရှိသည်။ အဓိကကျွန်းလေးကျွန်းရှိသည်။ Tortola၊ Virgin Gorda, Anegada နှင့် Jost Van Dyke ။
Tortola သည် ၂၄ စတုရန်းမိုင်ကျယ်သည့်ကျွန်းများတွင်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏မြို့တော်သည် Road Town ဖြစ်ပြီးဘီအိုင်ကျွန်း၊ BVI ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် terminal Terrance B Lettsome လေဆိပ်၏နေရာဖြစ်သည်။
BVI ရှိကျွန်းများ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းမှာမီးတောင်ဖြစ်ပြီးအမြစ်တွယ်။ Anegada မှလွဲ၍ ကြွယ်ဝသောရှုခင်းများနှင့်မညီမျှသည်။ ထုံးကျောက်နှင့်သန္တာကျောက်တန်းများဖြင့် Anegada သည် BVI ကျွန်းစု၏အရှေ့မြောက်ဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိသည်။ ကျွန်းတိုင်းသည်လွှမ်းခြုံနိုင်သောပင်လယ်ရှုခင်းအပေါ်ရှုထောင့်ကိုဖမ်းမိသည်။
ဘက်လိုက်မှုကင်းမဲ့ခြင်း၊ အထွေထွေဥပဒေများ၊ နိုင်ငံရေးခိုင်မာမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတို့ကြောင့်ဘဏ္specialistsာရေးကျွမ်းကျင်သူများသည်ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစု (BVI) ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးလက်ရှိကော်ပိုရိတ်စနစ်အတွက်ဆွဲဆောင်သည်။ BVI သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္specialistsာရေးကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ဘဏ်များအားမောင်းနှင်ခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည့်အရင်းအနှီးများကိုစုဆောင်းရန်နှင့်လက်လှမ်းမီရန်ဘက်မလိုက်။ လုံခြုံသောအဆင့်ကိုပေးသည်။
BVI အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏စီးပွားရေးနှင့်ပြissuesနာများကို၎င်း၏အကြီးအကဲများကကြီးကြပ်သည်။ သူတို့သည်အခြေခံရိုးသားမှုနှင့်အညီအမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ရှိပြီးအဖွဲ့အစည်း၏အကြီးမားဆုံးသောအကျိုးအမြတ်ကိုလက်ခံရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြင့်တာဝန်ယူသည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ M&A တွင်ရှင်းလင်းစွာခွင့်ပြုထားပါက BVI ဥပဒေသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသို့မဟုတ်စုဆောင်းသူများ၏စုဆောင်းမှု၏အကြီးမားဆုံးသောအကျိုးကျေးဇူးကိုဆောင်ရွက်ရန်အကြီးအကဲအားထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ ဤသည်မှာပူးတွဲကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ စုပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုစီတိုင်းသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏စုစုပေါင်းသို့မဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်အဖွဲ့အစည်း၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အားသာချက်များကိုလုံလောက်စွာပြောဆိုရန်အကြီးအကဲတစ် ဦး ကိုရွေးချယ်နိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်ပူးတွဲကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အံ့ ingly စရာကောင်းသည့်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အကြီးအကဲသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်တစ် ဦး ချင်းဖြစ်စေ၊ BVI တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်အကြီးအကဲတစ် ဦး သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန်မလိုအပ်ပါ။ ထို့အပြင် BVI အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့်တိကျသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသို့မဟုတ်စုဝေးမှုများကိုပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အကြီးအကဲများသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်အစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပရန်အလားတူareaရိယာတွင်မဖြစ်သင့်ပါ။ ၎င်းကိုဖုန်းသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုအစည်းအဝေးများပြုလုပ်နိုင်သည်။
BVI တွင်လူသိအများဆုံး (နှင့်ပုံမှန်လွဲမှားစွာ) လွဲမှားသောအားသာချက်အားဖြင့် BVI အဖွဲ့အစည်းများအားဘက်မလိုက်သောကုသမှုဖြစ်သည်။ BVI အဖွဲ့အစည်းများမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခကြေးငွေပေးဆောင်စရာမလိုပါ၊ ၎င်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ကိုခိုင်မာစေရန် BVI ကိုအကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ BVI သည်ကမ္ဘာ့ရန်သူဖြစ်သောတရားမ ၀ င်အခွန်ရှောင်ရှားခြင်းလမ်းညွှန်ချက်တွင်ကမ္ဘာ့အကြီးအကဲဖြစ်သည်။
BVI အဖွဲ့အစည်းများသည်ကမ္ဘာ့အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစတော့အိတ်ချိန်းတွင်မှတ်တမ်းတင်ခံရသည်။ သူတို့ကိုလန်ဒန်၊ နယူးယောက်မှစင်ကာပူနှင့်ဟောင်ကောင်အထိငွေကြေးနှင့်သက်ဆိုင်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရင်းအနှီးသို့ ၀ င်ရောက်ရန်အတွက်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသော၊ ဘက်မလိုက်သောသမာသမတ်ရှိသောယာဉ်များအဖြစ်ယူမှတ်ကြသည်။ ရန်ပုံငွေရှာဖွေသူများသည်အရင်းအမြစ်များကို startup တစ်ခုထဲသို့ထည့်သောအခါစွန့်စားမှုအစားထိုးရှာဖွေမှုကိုရှာဖွေကြလိမ့်မည်။
BVI တွင်သတင်းအချက်အလက်အာမခံမှုကိုစီမံခန့်ခွဲရန်သင့်လျော်သောပြဌာန်းချက်များယခုအချိန်တွင်မရှိသေးပါ။ BVI အစိုးရသည်သင့်လျော်သောသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြen္ဌာန်းမှုကိုမကြာမီစတင်မည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်။ တစ် ဦး ချင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုထပ်မံအသိပေးခြင်းမပြုလုပ်မှီ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေတွင်ကျင့်သုံးသောသီးသန့်တည်ရှိမှု၏လမ်းညွှန်ချက်အရစီမံခန့်ခွဲသည်။ သတင်းအချက်အလက်အာမခံအခွင့်အာဏာနှင့်စာရင်းသွင်းရန်၊ သတင်းအချက်အလက်အာမခံအရာရှိကိုအမည်ပေးရန်သို့မဟုတ်တရားဝင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများပြုလုပ်ရန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက် BVI အနေဖြင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါ။ ၀ ယ်သူများနှင့်ယုံကြည်မှုရယူရန်ဤစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုများသည်သိသာထင်ရှားသော်လည်းစီစဉ်သူများကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်အတွင်းပိုင်းချဉ်းကပ်မှုများကိုလိုအပ်သလိုလျောက်ပတ်စွာဖွဲ့စည်းရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
BVI တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် - BVI၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ BVI တွင်စတင်ခြင်းနှင့် BVI သို့မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ ခုတွင်ထူထောင်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်နေရာတည်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။
BVI တွင် Company Incorporation ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည် BVI တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းမှစီးပွားရေးအဖြေများအားအဆုံးသတ်ရန်နှင့် BVI ရှိ virtual office ကို BVI တွင်ပြုလုပ်ထားသောစိတ်ကြိုက် HR ဖြေရှင်းနည်းများကိုပြည့်စုံစေရန်ကျွမ်းကျင်သောနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုငှားရမ်းရန်လည်းကူညီသည်။ BVI တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၀ ယ်ခြင်း၊ BVI တွင် virtual နံပါတ်၊ BVI တွင်စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်း၊ BVI တွင်တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ BVI တွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံခြင်း၊ BVI တွင်စီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ BVI မှ CRM Solutions၊ Merchant account BVI သို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုရသည့်တံခါးဝ BVI၊ BVI တွင် Web Development၊ BVI တွင် Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ BVI ရှိ Ecommerce ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ BVI တွင်အက်ပလီကေးရှင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ BVI တွင်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ BVI တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊
BVI တွင်တည်ထောင်ပြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီများအတွက် - BVI အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှအဆုံးမှအဆုံးဖြေရှင်းချက်များကို BVI မှကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့် BVI မှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်များအပါအ ၀ င်အရည်အချင်းပြည့် ၀ သော ၀ န်ထမ်းများအားကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောကျွမ်းကျင်လုပ်သားများကို BVI တွင်လည်းကောင်း၊ BVI တွင်စီးပွားရေးရောင်းဝယ်မှုနှင့် ၀ ယ်ခြင်း၊ BVI တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI တွင် virtual နံပါတ်များ၊ BVI တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချဲ့ထွင်ခြင်း၊ BVI တွင်တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ BVI တွင်စီးပွားရေးအတွက်စီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ BVI တွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ BVI ရှိ CRM Solutions၊ Merchant account နှင့် payment gateway BVI တွင် BVI တွင်ပစ္စည်းကိရိယာငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် BVI တွင်အရင်းအနှီးငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ BVI ၌လုံ့လဝီရိယရှိခြင်းနှင့်လိုက်နာခြင်း BVI ရှိအိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများ၊ BVI တွင် Web Development၊ BVI တွင် Ecommerce Development၊ BVI တွင်အက်ပလီကေးရှင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ BVI တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ အလွန်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းဖြင့်အနည်းငယ်ကိုအမည်ပေးရန် BVI တွင် Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
BVI အတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု BVI အတွက်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာ BVI နဲ့ကမ္ဘာ့ ၁၀၉ နိုင်ငံမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးပေးပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာဝန်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှမပေးနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဟာဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဟာအကြီးမားဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲကတစ်ခုလို့ပြောတာမှန်တယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကူညီပေးနေသည်၊ စီးပွားရေးအတိုင်းအတာကြောင့် BVI တွင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ BVI အတွက်အဖြေတစ်ခုပေးပါသည်။
BVI ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် BVI ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုစာရင်းကိုင်များကသင့်ကိုလမ်းပြလိမ့်မည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း BVI (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း BVI (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း BVI
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း BVI
BVI BUSINESS COMPANY အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုကြေး
Merchant Account BVI / Payment Gateway BVI
BVI BUSINESS COMPANY မှအမည်စာရင်းတင်သွင်းသူ
BVI ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
Logo COMPANY BVI အတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း
BVI တွင်ရှိသော Offshore ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / အစုရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
BVI စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်စာရွက်စာတမ်းများ Apostille
BVI Offshore ကုမ္ပဏီအတွက်သံရုံးမှတရားဝင်
စီးပွားရေးကုမ္မဏီ BVI အတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal
BVI ရှိနောက်ထပ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပိတ်ပါ
●စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်ဝန်ဆောင်ခ (BVI (ပထမနှစ်) - ဒေါ်လာ ၅၆၉
● BVI တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခ - ဒေါ်လာ ၆၀၀
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ကျေးဇူးပြု၍ BVI တွင်ကုမ္ပဏီ TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမည် ၃ ခုပေးပါ)
● BVI တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်တင်သွင်းခြင်း
● BVI ရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအခကြေးငွေများကိုတစ်နှစ်ပေးဆောင်ရမည်
● BVI ရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာကိုတစ်နှစ်ထောက်ပံ့ပေးပါ
● BVI ရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်ကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးကိုတစ်နှစ်ထောက်ပံ့ပေးရသည်
● BVI ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကုမ္ပဏီအတွက်သင်၏စံသတ်မှတ်ထားသောကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်းအောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည်။ မှတ်စုများနှင့်အသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ရှယ်ယာလက်မှတ်များ၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
BVI တွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်၊ ဒေသအရင်းအမြစ်များကိုသင်နှင့်နီးကပ်စွာကျွန်ုပ်တို့အားအကြံဥာဏ်များပေးသည်။ သင် BVI သို့မဟုတ်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်လိုပါကအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။
စီးပွားရေးကုမ္ပဏီ BVI အတွက်ကုန်သည်စာရင်း
စီးပွားရေးကုမ္ပဏီ BVI အတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
စီးပွားရေးကုမ္ပဏီ BVI အတွက်အခွင့်အာဏာရှိသည့်အစုရှယ်ယာများတိုးပွားလာခြင်း
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ BVI မှာ Million Makers ကတဆင့်
BVI တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသင်မှတ်ပုံတင်လိုပါက BVI တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် BVI ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကိုမည်သို့ရှင်းလင်းရမည်ကိုရှင်းလင်းစွာ၊ BVI တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည် BVI ၌ကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် BVI တွင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ BVI အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၉) နိုင်ငံ၏နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ယက်နှင့် BVI တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့သည် BVI တွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်ကူညီပေးပါမည်။ ငါတို့မှတစ်ဆင့် BVI ။ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကို BVI တွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ သင်လျှောက်ထားလိုပါက BVI အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့သည့်သင်နှင့်သင့်မိသားစုအတွက် BVI အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုလည်းသင့်အားကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ အဘို့ BVI နေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
BVI ရှိကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများအဖွဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကို BVI တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်ဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
BV BVI အတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်
BV BVI အတွက်နေထိုင်ခွင့်
BV BVI အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး
BV BVI အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ BVI ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် BVI.
BVI တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ BVI တွင်ကုမ္ပဏီ Incoporation နှင့် BVI တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
BVI တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုကြောင့် BVI တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ BVI ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ BVI တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးများနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်များကြောင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အရေးပါမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ BVI တွင်တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနည်းလမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ BVI တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း - BVI တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း
BVI အပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှပင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အမြားကိုကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ Million Makers တွင်ပေးထားပါသည်။ BVI နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတို့တွင်စီးပွားရေးအဖြေရှာမှုများကိုအစမှအဆုံးထိပံ့ပိုးပေးနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုပြောလျှင်မှန်ကန်ပေလိမ့်မည်။ စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်“ BVI တွင်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ” ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။
BVI ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုတွင် BVI မှပါဝင်သည်။
Registry တွင် BVI ကိုကုမ္ပဏီအမည်ရှာဖွေပါ။
BVI တွင်အစုရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်း ၀ င်များကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
BVI ရှိ BVI / IBC ရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများအသင်း၏စာချွန်လွှာနှင့်စာတမ်းများ။
BVI ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို BVI တွင်ဖော်ပြထားသည်။
BVI တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော BVI / IBC တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောစီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်။
မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ကိုယ်စားလှယ်၊ BVI ရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီကိုမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါက။
မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ရုံး၊ မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါက BVI ရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီကို BVI ရှိ IBC ။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ BVI ရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ / BVI ရှိ IBC:
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: သင်သည် BVI တွင်လိုင်စင်မလိုပဲလုပ်ဆောင်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်မှခွင့်ပြုထားသည့် BVI တွင်ခွင့်ပြုချက်ပြုပါကကျွန်ုပ်တို့သည် Million Makers ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်လိုင်စင်မဲ့လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သော BVI တွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်ကစားခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊ BVI တွင်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်းနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ BVI တွင်ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ BVI မှအာမခံလုပ်ငန်း၊ BVI မှအခြားကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဘဏ္basedာရေးအခြေခံကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများနှင့် BVI ရှိအခြားငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ၊ BVI တွင်လဲလှယ်ခြင်း၊
BVI ရှိ Crytocurrency လိုင်စင်ကိုလိုင်စင်ချပေးရန်လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
BVI နှင့် "အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမေရိကန် ၅၀ အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ" တွင်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်းအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
ဘီလီယံနှင့်ဆိုင်သောထုတ်လုပ်သူသန်းပေါင်းများစွာကို BVI တွင်လည်းကောင်း၊ BVI တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်များနှင့်လည်းကောင်း၊ BVI တွင် Professional CFA နှင့်လည်းကောင်း၊ BVI တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ BVI တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ BVI တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများမှတစ်ဆင့် BVI တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသည်။
BVI ရှိအခွန်ထမ်းများနှင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် BVI တွင်ကြီးမားသောအစုစုကိုကျွန်ုပ်တို့စီမံခန့်ခွဲသည်။
BVI တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် BVI တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် BVI နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းတို့ဖြင့်ဖောက်သည်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။
BVI ရှိလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ လမ်းမကြီးရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုများ စပိန်မြို့ရှိ Corporate Services | ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုရှိ Corporate Services
BVI တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် BVI ၌ကုမ္ပဏီ ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက် BVI ရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံများ၊ BVI တွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ BVI တွင်ကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက် BVI တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI တွင်ရှိသောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက် BVI မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI တွင်ရှိသောကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက် BVI ရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ BVI တွင်ရှိသောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
BVI ရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ | Road Town ရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ | စပိန်မြို့ရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ | ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုရှိစီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံများ
BVI နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
BVI တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် BVI ၌ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ပါ။
သင်၏ကုမ္ပဏီ BVI တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် BVI.
BVI တွင်စာရင်းကိုင်များ Outsourcing
သင့်ကုမ္ပဏီကိုသင် BVI တွင်သင်အပ်နှံပြီးပါပြီ စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို BVI မှာ။
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဝယ်ယူပါ BVI တွင်ကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာ ၀ ယ်ခြင်းသို့မဟုတ် BVI တွင်ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့် BVI တွင်ဖြစ်သည်။
HR အတိုင်ပင်ခံ BVI တွင်သင်၏ ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးသည်သင်၏ ၀ န်ထုပ် ၀ န်ပိုးများကိုဝန်ထုတ်။ BVI တွင်စုဆောင်းနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ BVI တွင်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ BVI နှင့်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၇ နိုင်ငံမှာ“အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းBVI ၌တည်၏
BVI တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ BVI.
BVI တွင် cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် BVI မှ offshore သို့မဟုတ် EU တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များအတွက်။
BVI ရှိ CRM ဖြေရှင်းချက်များ
CRM ဆော့ဝဲ BVI ရှိအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပါအဝင်သင်၏ဖောက်သည်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် BVI တွင်ပံ့ပိုးမှုများကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။
Virtual Number - BVI အတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် BVI ရှိစီးပွားရေး VoIP အပါအဝင် BVI ရှိအခြား VoIP ဖြေရှင်းချက်များ BVI ရှိလူနေအိမ် VoIP ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံအတွက် BVI မှဖြစ်သည်
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း BVI BVI တွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ $ 100 နှင့်အတူစတင်
BVI ရှိ Software Development ကုမ္ပဏီ
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု BVI, BVI တွင် CryptoCurrency Software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် BVI ရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
စျေးနှုန်းချိုသာသော Software Development BVI | စျေးသက်သာသောအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု BVI
အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုင်ရှင်များ၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် BVI တွင်လျင်မြန်သောကုမ္ပဏီများပါဝင်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းများနှင့် BVI တွင်ပါ ၀ င်သောတိကျသောဖြစ်စဉ်များကိုလျင်မြန်စွာလိုက်နာရန်ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ BVI ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခု (သို့) ဖောက်သည် ဦး စားပေးသောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရာနေရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများကြွယ်ဝခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအဘယ်အရာများနှင့်၎င်းတို့ကိုမကူညီတော့မည့်အရာများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည် BVI တွင်သူတို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် BVI တွင်နေထိုင်သူများနှင့် BVI တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သောနိုင်ငံခြားသားများအား BVI တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီ၊ BVI တွင်ပါဝင်သောစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ၊ BVI တွင်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ BVI ရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ BVI စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ BVI စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, BVI ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ BVI ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
BVI တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်အထောက်အပံ့ BVI တွင် IBC ပေါင်းစည်းခြင်း BVI တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း BVI တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | BVI တွင် IC ပါဝင်မှု BVI တွင် LLC တည်ထောင်ခြင်း BVI တွင် LLC ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း BVI တွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
BVI တွင်နေထိုင်သူများနှင့် BVI တွင် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကိုလည်းထောက်ခံသည်။ BVI တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI တွင် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ BVI တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , BVI IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ BVI IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI ကမ်းလွန် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊
BVI တွင်နေထိုင်သူများနှင့် BVI တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။ BVI တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI တွင်ပါဝင်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ၊ BVI တွင်ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။ BVI တွင်ပါဝင်သောကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ BVI တွင်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ BVI အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ BVI အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း BVI ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း BVI ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် BVI တွင်နေထိုင်သူများနှင့် BVI တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သောနိုင်ငံခြားသားများအား BVI တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI တွင်ပါဝင်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI တွင်ရှိသောကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ BVI ရှိကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ BVI အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ BVI အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, BVI အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, BVI ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, BVI ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
BVI တွင်နေထိုင်သူများနှင့် BVI တွင် IC ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကို BVI တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI တွင် IC ပါဝင်ခြင်း၊ BVI တွင်ကမ်းလွန် IC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ BVI တွင်ပြုလုပ်သောကမ်းလွန် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI တွင်ပြုလုပ်သောကမ်းလွန် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ , BVI IC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ BVI IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI IC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ BVI ကမ်းလွန် IC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ BVI ကမ်းလွန် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
BVI တွင်နေထိုင်သူများနှင့် BVI တွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကို BVI တွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI တွင်ထည့်သွင်းခြင်း၊ BVI တွင်ကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ BVI တွင်ရှိသော Offshore LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI တွင်ရှိသောကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , BVI LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, BVI LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, BVI LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, BVI ကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, BVI ကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်။
BVI တွင်နေထိုင်သူများနှင့် BVI တွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သောနိုင်ငံခြားသားများကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။ BVI တွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI တွင်ကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ BVI တွင်ရှိသောကုမ္ပဏီကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။ BVI တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ BVI LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, BVI LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, BVI LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, BVI ကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, BVI ကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
BVI တွင်နေထိုင်သူများနှင့် BVI တွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းရှိနိုင်ငံခြားသားများကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။ BVI တွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI တွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ BVI တွင်ရှိသော IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ BVI တွင်ရှိသော IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ BVI IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ BVI IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, BVI IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, BVI ကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, BVI ကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
စီးပွားရေးကုမ္ပဏီကို BVI တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ III ကို BVI တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ BVI တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မည် BVI တွင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ BVI တွင် IC မှတ်ပုံတင်ပါ LLC ကို BVI တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ BVI တွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ III ကုမ္ပဏီကို BVI တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - BVI တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
BVI တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ BVI တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း BVI တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ BVI မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ BVI မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ BVI တွင်အထောက်အပံ့များမှာ - Road Town တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Road Town တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Road Town မှ Offshore ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Road Town မှ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Road Town မှ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, စပိန်မြို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စပိန်နိုင်ငံမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စပိန်နိုင်ငံမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စပိန်နိုင်ငံမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဗြိတိသျှဗာဂျင်ကျွန်းများတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဗြိတိသျှဗာဂျင်ကျွန်းစုများတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဗြိတိသျှဗာဂျင်ကျွန်းစုမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း , ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစု။
BVI တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Road Town တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | စပိန်မြို့တွင်ဈေးအပေါဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုများတွင်အနိမ့်ဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
BVI တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း BVI ၌ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၏ထောက်ခံမှုဖြင့် BVI တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် BVI တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များမှအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်သည်။ မြို့တော်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များကို Road Town ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များအတွက်ကူညီသည်။ Road Town ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Road Town ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Road Town ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Road Town ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Road Town ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Spanish Town ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Spanish Town ကုမ္ပဏီမှကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရေးကိုယ်စားလှယ်များ Spanish မြို့ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Spanish Town ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Spanish Town ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဗြိတိသျှဗာဂျင်ကျွန်းစုရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုများတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုများတွင်မှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ ဗြိတိသျှ V ကိုကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များ irgin Islands, British Virgin Islands ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
BVI တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ Road Town တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ Spanish Town တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုများတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ
သင် BVI တွင်တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ BVI မှာစျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကို BVI မှာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတွေ၊ BVI မှာမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တဲ့လူသိများတဲ့ BVI မှာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုပေးအပ်တာပါ။ Road Town တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Road Town ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Road Town ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Road Town တွင်ရှိသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Road Town ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စပိန်မြို့ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ စပိန်မြို့ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ စပိန်မြို့ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ စပိန်မြို့ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းများတွင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများ ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု။
BVI တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Road Town တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း Spanish Town တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း British Virgin Islands တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
BVI တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
BVI တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ BVI တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ BVI တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ BVI တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းရန်၊ BVI တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ BVI တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ BVI တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Road Town တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ။ Road Town တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ။ Road Town တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းပါ။ Road Town ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပါ။ Road Town ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပါ။ Road Town ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပါ။ Spanish Town မှကုမ္ပဏီတစ်ခု၊ Spanish Town တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းခြင်း၊ Spanish Town တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ Spanish Town တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း၊ Spanish Town တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း၊ ဗြိတိသျှဗာဂျင်ကျွန်းစုများတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်မြို့ကြီးများသည်ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုများတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း၊
BVI တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ လမ်းမတွင်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ စပိန်မြို့တွင်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုတွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှု
ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်သည် BVI တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား။
BVI တွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများကိုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ BVI တွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘဏ်အကောင့်ရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက် BVI တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားအားကူညီထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ , Road Town တွင်နိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘဏ်အကောင့်ရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက် Road Town တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စပိန်မြို့ရှိနေထိုင်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စပိန်မြို့ရှိနိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စပိန်မြို့တွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်၊ ကုမ္ပဏီစာရင်းဖွင့်ခြင်း။ ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုတွင်နေထိုင်သူများမဟုတ်သူများကိုမှတ်ပုံတင်၊ ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုတွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဗြိတိသျှဗာဂျင်ကျွန်းများတွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘဏ်စာရင်းရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ BVI | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများမြို့တော် ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ Spanish Town | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစု
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် BVI တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် BVI တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် BVI တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် BVI တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခအခကြေးငွေ BVI တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ BVI တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် BVI တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျမှု BVI ကုမ္ပဏီကုမ္မဏီတည်ထောင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် BVI တွင်ဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ် BVI တွင်ကုမ္ပဏီကုန်ကျခဲ့သည်။
စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း BVI | လမ်းမရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းစပိန်နိုင်ငံတွင် | ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး
ကျွန်ုပ်သည် BVI တွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးကို BVI တွင်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။
BVI တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်သို့မဟုတ် BVI တွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် BVI တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန် BVI တွင်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များရှိသည်။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
BVI တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ စီးပွားရေးမြို့လမ်းမကြီးတွင်ထည့်သွင်းပါ စပိန်မြို့တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ British Virgin Islands တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ
BVI တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား BVI တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း BVI တွင်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း BVI တွင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း BVI တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း BVI တွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း LLC BVI တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း BVI တွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
BVI တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထည့်သွင်းပါ IBC ကို BVI တွင်ထည့်သွင်းပါ BVI တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထည့်သွင်းပါ BVI တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းပါ BVI တွင် IC ထည့်သွင်းပါ BVI တွင် LLC ထည့်သွင်းပါ BVI တွင် LLC ကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ III ကုမ္ပဏီကို BVI တွင်ထည့်သွင်းပါ
BVI တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် BVI တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်မည်သို့ခြားနားသနည်း။
BVI တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း (သို့) BVI တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း (သို့) BVI တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့အကြားကွဲပြားမှုမရှိဟုသုံးစွဲသူများစွာမေးလေ့ရှိသောဤအခြေခံမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်အတွက်၎င်းတို့သည် BVI တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါဝင်သောကုမ္ပဏီအတွက်အသုံးပြုသောစကားလုံးများဖြစ်သည်။
BVI တွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု BVI တွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု BVI တွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
သင်၏ BVI တွင်သင်၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကို (သို့) BVI တွင်ရှိသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်အဘယ်ကြောင့်သုံးရမည်နည်း။
BVI တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းရန်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုထူးကဲမှုကိုထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ BVI တွင်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအမြောက်အများနှင့် BVI တွင်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းစာရင်းကိုင်များကြောင့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ BVI တွင်လည်းကောင်း၊ BVI ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတိုင်ပင်ခံကိုလည်းကောင်း BVI တွင်စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
BVI တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ BVI တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ | BVI တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ
နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက် BVI တွင်အထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
BVI တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအားအထူးကူညီပံ့ပိုးပေးသည်။ Road Town တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စပိန်မြို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ သင်ဟာနိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး BVI မှာကုမ္ပဏီဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊
BVI တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် BVI ရှိနိုင်ငံခြားသားအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း။
ယနေ့ BVI တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းပါ။
BVI တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ BVI တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် BVI တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းရန်သို့မဟုတ် BVI တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါကသို့မဟုတ် BVI တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ BVI တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်။ BVI တွင်အလားတူပင် Road Town တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Road Town တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Road Town တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Road Town တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Road Town တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ Road တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်။ Town မြို့သည် Road Town တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ Spanish Town တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စပိန်မြို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း (သို့) စပိန်မြို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) စပိန်မြို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း၊ Spanish Town မှကုမ္ပဏီတစ်ခု၊ Spanish Town တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း၊ British Virgin Islands တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း၊ British Virgin Islands တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း (သို့) British Virgin Islands တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းသို့မဟုတ် British Virgin Islands တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ British Virgin Islands တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီး British Virgin Islands တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊British Virgin Islands တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်
BVI တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Road Town တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း Spanish Town တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု British Virgin Islands တွင်ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
BVI FSC ဘဏ္Literာရေးဆိုင်ရာတတ်မြောက်မှုအစီအစဉ် https://www.moneymattersbvi.org
ကာရစ်ဘီယံဘဏ္Actionာရေးလှုပ်ရှားမှု Task Force https://www.CFATF.org
BVI လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန• https://www.bvi.gov.vg/departments/immigration-department-0
BVI အမျိုးသားဥယျာဉ်ယုံကြည်မှု• https://www.bvinationalparkstrust.org/
BVI ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်• https://www.bviports.org/
BVI လူမှုဖူလုံရေး• https://www.bvissb.vg/
BVI လေဆိပ်အာဏာပိုင် https://www.bviaa.com/
BVI ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန https://www.bviddm.com/
BVI ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ငါးလုပ်ငန်း https://www.bvidef.org
BVI ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး https://www.bvi.gov.vg/content/governors-groupdeputy-governors-office
BVI ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းယူနစ် https://www.bvi.gov.vg/departments/central-statistics-office-0
BVI ကုန်သည်များနှင့်ဟိုတယ်ကုန်သည်များအသင်း • https://www.bviccha.org/
BVI Tap Association / BVI ၏ရတနာများ• https://www.jewelsofthebvi.com/
BVI မြို့နှင့်နိုင်ငံစီမံကိန်း https://www.tcp.gov.vg/
BVI သင်္ဘောမှတ်ပုံတင် https://www.vishipping.gov.vg/
BVI ဆက်သွယ်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေကော်မရှင် (TRC) https://www.trc.vg/
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် BVI ရှိငွေကြေးခဝါချမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလုံး ၀ ဆန့်ကျင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောလူများကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ BVI အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
● BVI အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
● BVI အတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊ ပစ္စည်းခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ် BVI အတွင်းနှင့်၎င်းမှသို့မဟုတ်သို့ ၀ င်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းသူလျှိုများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးမှုမရှိပါ။
● BVI အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကို BVI ၏ဥပဒေအရအနက်ရောင်စာရင်းဝင်သည့်တရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချင်းစီအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
● BVI အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကို BVI တွင်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ်မှဖြစ်စေမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
● BVI အတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလူတစ် ဦး ချင်းစီ၊ ကုမ္ပဏီများအတွက် BVI တွင်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်း။
● BVI အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုသည်လူသို့မဟုတ်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်မဆို BVI တွင်ရှိသောသို့မဟုတ် BVI ရှိပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
● BVI အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မွေးစားခြင်းအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါ၊ အငှားမိဘအုပ်ထိန်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊
● BVI အတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်သူတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများကို BVI အတွင်းမှသို့မဟုတ်သို့မဟုတ် ၀ င်ခွင့်မပြုပါ။
● BVI အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအခြေပြု BVI တွင်ပါ ၀ င်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
● BVI အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကို Pyramid အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်နေသော BVI ရှိပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်သော်လည်းကောင်း၊
● BVI အတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နေသည့် BVI မှပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် BVIတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် BVI, BVI ဘဏ်အကောင့်, BVI ယုံကြည်မှု BVI ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု BVI။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ BVI အတွက်
အခမဲ့တိုင်ပင်တောင်းဆိုခြင်း BVI အတွက်
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-bvi/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-bvi/ မှသင်၏ website သို့လာခဲ့သည်
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-bvi/